यो पनि बद्‌लिनेछ - TGuff
यो पनि बद्‌लिनेछ
Tue Jul 24 0	Comments
कसको जीवन एकनासले सलल्ल बगेको होला ? जीवनका उतार चढावको हिसाव किताब लगाएर जोड घटाउ गर्न थाले अबको बाँकी जीवन त्यसैमा बित्दो हो। यो यथार्थ बुझेर वर्तमानमा बाँच्ने कला जानेका मान्छे संसारमा कति होलान्? कीर्तिपुरको धम्मकित्ति विपश्यना केन्द्रको छतमा बसेर काठमाडौं खाल्डोको कंक्रिट जंगलतिर आँखा तेर्स्याउँदै गर्दा एउटा सोचले मनलाइ छचल्कायो। भर्खरै ३ घण्टाको लगातार ध्यानबाट उठ्दा मन पुलकित थियो। लाग्यो मान्छे त जीवन जिउने कला नजानेर पो दुखको भूमरीमा रुमल्लिरहेका छन्। जीवन सहज छ। जीवनका नियमित आउने घटना पनि सहज छन्। जीवन एउटा आफ्नै नियममा बग्छ। एउटा सहज नियम— परिवर्तनको नियम। दुःख आउँछ तर त्यो सधैँलाइ हैन। सुख आउँछ र त्यो पनि केही समयको लागि मात्र हो।
म वरपर र संसारका अधिकांश मानिसहरुको पनि समस्या यही हो। सायद, हामी यो नियम आत्मसाथ गर्न नसकेर अधिक खुशी हुन्छौं। त्यो खुशी जीवनबाट जाँदा धेरै दुःखी।
वरपर हेर्छु। भर्खर विवाह भएकी साथी छे। केही दिन अघिसम्म विवाहले सबथोक दियो भनेर उ खुशीले दंग थिइ। उसलाई खुशी देख्दा मलाई पनि आनन्द लाग्थ्यो। तर अर्को दिन त्यही साथी आएर पार्टनरसँग ठाकठुक पर्योग भन्दै तनाव बाँड्न थाल्छे। छटपटाउन थाल्छे। अनि म उसको जीवनलाई अझ पार्ट पार्ट गरेर नियाल्ने कोसिस गर्छु। हिजो रोमान्समा रहँदा उसले यो सोचेकै थिइनँ। जब मनले चाहेजस्तो भएन पीडा, छटपटि त हुने नै भयो। ओहो! दुःखैदुःख, तनावै तनाव !!
कोही चाहिँ सानो चिज, वस्तु, पाउना साथ घमण्डले फुल्छन्। प्राप्तिको दौडमा कुदिरहेकाहरु अप्राप्तिको तनाव फ्याँक्दै हिँड्छन्। गोयन्का गुरुजीको प्रवचन सुन्दै गर्दा मनभरि मेरा तिनै साथीहरु घुम्दैछन्। साँच्चै परिवर्तन आत्मसात गर्न नचाहने आशक्तिले जीवनलाई दुःखी नै बनाउँदो रहेछ। हामी खुशी खोज्दै कहाँ पुग्दैनौं र? तर आजसम्म संसारमा कसले आफूले भेटेको सुखलाई फुत्कन नदिई बाँधेर राख्न सकेको छ र? अथवा कुन चाहिँ दुश्मनले मानिसको दुखलाई बाँधेर सदाकाल दुखी बनाएर राख्न सकेको छ? हिजोका करोडपति आज रोडपति बनेका छन्, हिजोका कंगालहरु आज अरबपती बनेका छन्। हिजोका दुखीहरु आज सुखमास्थित भएका छन्।
गुरुजीको प्रवचन सकिएपछि पनि एउटा वाक्य मनमा घुमिरहेछ। खुशी हुनमा दोष छैन तर खुशिसँगको आशक्ति दुःख हो। साँच्चै जीवनले हाम्रो भागमा सुख राखिदिए पनि हामीलाई सुख भोग्न आउँदैन, भोग्ने कला आउँदैन। जीवन बाँच्ने कला आउँदैन। तीन वर्षअघि नयाँ ल्यापटप किनेको दिन सम्झन्छु त्यसमा अलिकति स्क्रयाच हुँदा तनावले निदाउन गाह्रो भएथ्यो। त्यसको अपिरियन्सको सुरक्षा गर्नमा यति धेरै ध्यान गयो कि त्यसलाई भोग्ने भन्दा त्यसप्रतिको चिन्तामा धेरै समय बित्यो। पहिलेको ठूलो ल्यापटपको स्थानमा अहिले मसँग लेनेभोको ह्यान्डी नेटबुक छ। ल्यापटप मात्र हैन हिजोआज मेरो मनस्थिति पनि केही बद्लिएको पाउँछु। अलि शान्त, अलि सुखी। ल्यापटप स्क्रयाच त पहिले झै अहिले पनि हुन्छ। फरक यति हो पहिला त्यसले पीडा दिन्थ्यो अहिले खासै दुःखी हुन्न।
जीवनका साना ठूला स्क्रयाचले जीवनलाइ दुःखाउँदो नै रहेछ। ‘दिस टु स्याल चेन्ज’ भन्ने एउटा चेतनाले भित्रबाट घच्घच्याइरहन्छ। जीवनका समस्याहरुसँग जुध्न यो चेतनाले गरेको सहयोग आफैंमा अवर्णनीय हुँदो रहेछ। आफ्ना अगाडि हरेक क्षण प्रेम घृणामा परिणत भएको, घृणा प्रेममा, तृष्णा वितृष्णामा परिवर्तन भएको वितृष्णा तृष्णामा, सुख तनाव र दुःखमा, दुःख सुखमा परिवर्तन भएको सामान्य घटनाप्रति सचेत भएर जीवनका आरोह अवरोह, उतार चढावलाई सामना गर्न सिक्नु भनेको साँच्चै जीवन जीउने कला रहेछ। जीवन बाँच्ने कला सिकाउने र सिकाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार।
Spirituality smita-poudel-kathmandu-nepal-kritipur spiritulaity vipassana